The interface nke gam akporo 12 ga-enweta mgbanwe dị mkpa | Gam akporosis
Android 12 ga - enweta mgbanwe mgbanwe dị mkpa dị ka akụkụ nke Ihe Design Next
N’izu gara aga, usoro ndị ana enweta e leaked na gosipụtara ihe ga-abụ mgbanwe ndị dị mkpa na interface nke gam akporo 12. Ọ ga-abụ akụkụ nke ihe a na-akpọ "ỌZỌ" site na Nhazi Ihe, asụsụ ahụ gbanwere ihe niile maka gam akporo n'afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ihe oyiyi ndị a sitere na a dọkụmentị gugul nyere ndị mmekọ OEM ya na ha dị ka ịkwa emo nke mmụba anya na ngosipụta na-eche na gam akporo gam akporo 12. Ihe onyonyo ndị ahụ edere nwere ụfọdụ akụkụ dị mkpa nke interface dị ka ogwe ngosi, ụlọ, ntọala nzuzo na ngwa igwefoto.
1 Ọ gaghị abụ mgbanwe dị mfe na isiokwu
2 Mgbanwe na Ngosipụta na Mkpọchi ihuenyo na gam akporo 12
3 The ngosi panel na ndị ọzọ
Ọ gaghị abụ mgbanwe dị mfe na isiokwu
Ma ọ bụ na mgbanwe ndị ahụ ha ga-abịa dị omimi karịa naanị isiokwu nke enwere ike ịghọta dị ka otu n'ime sistemụ iji chọọ ya mma, mana enwere ọtụtụ karịa ihe echere na mbụ.
Dị ka anyị si mara, internally Google akpọwo ụfọdụ mgbanwe na interface dị ka mmalite nke ihe ga-abụ ihe na-esote. Asụsụ a haziri nke gbanwere n'otu oge dị ka otu ụdị ndị na-emepụta akara nke nabatara ya iji nye ya aka ha; anyị nwere ike ikwu banyere nke ahụ Samsung One UI 3.0.
Ọ bụ ihe edoghị anya ma "ỌZỌ" ga - adị ka aha maka Ihe eji emepụta 2.0, n'ihi na ọ nwere ike ịdị ka mmalite dị mkpa na Google gaara akpọ ya iji gosi ihe ga - eme ama ama.
E nwere ọtụtụ ihe ịmara ihe kpatara ya Android 12 nwere ike ịbụ tupu na mgbe maka interface na gam akporo, ọbụna ịmara na mgbanwe ndị a ga-adị ntakịrị na ụdị OEM na-anwa ịkwado asụsụ ahụ iji mee ka ọ bụrụ nke ha; kedu ka afọ ndị a siri gafee.
Mgbanwe na Ngosipụta na Mkpọchi ihuenyo na gam akporo 12
Ee ọ maara na Google na-agbanwe usoro nke Ngosipụta mgbe niile mkpọchi mkpọchi na gam akporo 12, nke ahụ ga-agụnye mgbanwe mgbanwe dị mma na ntinye akara ngosi na ndị ọzọ. Ọbụna ọ na-arụ ọrụ na ntụgharị ọhụrụ maka AoD na mkpọchi ihuenyo ahụ.
Ihe na-atọ ọchị bụ na mgbanwe ndị a agaghị ahụ anya na Onye Mmepụta Preview na-ewuli Android 12, dị ka ha ga-anọgide n'okpuru oyi akwa "Ahụmahụ Google". N'ezie, ọ ga-abụ Pixel na-esote nke ga-egosi mkpali ndị ọhụrụ a na interface maka ahụmịhe onye ọrụ ka mma.
Unlockkpụrụ Kpọghe interface ga-gbanwetụrụ na ngwaọrụ akara ga-ike n'ime mkpọchi ihuenyo onwe ya. Ma ọ bụ na otu ihuenyo mkpọchi a ga-enwe ohere maka mgbanwe ọhụrụ na elekere; ya mere dị ka ọ na-eme na Samsung AOD nke anyị nwere ike itinye wijetị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
The ngosi panel na ndị ọzọ
Ndị ahụ na-ejide gosi anyị ọkwa ngosi Ọ ga-ewerekwa mgbanwe gị. Dị nnọọ ka anyị ga-gaa na akaụntụ ọhụrụ usoro akwụkwọ ahụaja gburugburu na nke a na-akpọ "monet".
Kpomkwem ihe Isiokwu na leaked a na-akpọ ka «Silk» ọ dịkwa ka ọ ga-arụ ọrụ dị ka nke ejiri gosipụta usoro mmelite isiokwu gam akporo 12 ọhụrụ. Enwere ụfọdụ ntụnye aka na "Silk Home" na saịtị dị iche iche dị n'ime ya na isiokwu ahụ ga-abụ akụkụ nke ngwa akpọrọ "SilkFX". ihe a niile na ngwa Samsung Ezi mkpọchi nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ihe niile anyị chọrọ na ekwentị?
Ọchịchọ bụ na a isiokwu ga-dakọtara na gam akporo TV nakwa na ọ ga-agụnye Google TV (echefula otu esi eme ya Maapụ bọtịnụ Chromecast na Google TV).
N'ikpeazụ, esemokwu ahụ nwere ike ịbịa obere ngwa ngwa ngwa ngwa nke anyị chọrọ karịa taabụ iji nweta ha niile. Agbanyeghị, O yiri ka ọ na-adọrọ mmasị na gam akporo 12 a ka egosiri na screenshots, o nwere ike jiri otutu agba bia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Android 12 ga - enweta mgbanwe mgbanwe dị mkpa dị ka akụkụ nke Ihe Design Next
Otu esi ehichapụ mkparịta ụka Google Talk na Hangouts na Gmail